Raharaha BANI : Fitsarana politika – MyDago.com aime Madagascar
Nivoaka omaly ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha Bani. Tamin ny 5ora hariva no namoahan’ny mpitsara izany teny Anosy . Nohafahan’ny fitsarana madiodio ny Pr Ranjeva Raymond sy ny zanany vavy,izay anisan’ireo sivily voarohirohy tamin’ity raharaha ity. Ho an’ireo manamboninahitra kosa dia manao asa an-terivozona mandra-pahafatiny ny kolonely Andrianasoavina Charles. Ny jeneraly Raoelina sy Rakotonandrasana Noel, dia asa an-terivozona mandritra ny fito taona. Ny kolonely Coutiti, Ravoavy, Ramboasalama, Raberanto dia asa an-terivozina mandritra ny dimy taona. Mikasika ny vesatra niapangana ireo manamboninahitra sasany, anisan’izany ny komanda Roger Luc, sy kolonely Rabezandry, amin’ny fitaomana ny olona handray fitaovam-piadiana, sy hanongam-panjakana dia nohafahan’ny fitsarana noho ny fisalasalana izy ireo. Ireo no didim-pitsarana navoakan’ny mpitsara mikasika ity raharaha Bani Ivato ity.Nanomboka tamin’ny 2ora sy sasany no tapitra ny fitsarana, ary tamin’ny 5ora hariva vao nivoaka ny didim-pitsarana.Ny tapak’andro maraina moa dia fihainoana ireo mpisolovava ny voapanga no nibahana tamin’ny fitsarana. Tsiahivina fa telo andro no naharetan’ny fitsarana ireo manamboninahitra sy sivily voakasika tamin’ity raharaha ity. Efatra ihany izy ireo no niatrika ny fitsarana, hatry ny omaly, anisan’izany ny Pr Ranjeva Raymond sy ny zanany vavy, ny kolonely Coutiti sy Rabezandry. Ireo manamboninahitra sasany kosa dia nandà ny fitsarana azy ireo. Marihina fa horakoraka sy tabataba no nandraisan’ireo vahoaka nanatrika ny fitsarana tenyAnosy, ireo didim-pitsarana ireo.
5 réflexions sur « Raharaha BANI : Fitsarana politika »
Nahoana no nalaky navotsitra ingahy Ranjeva???efa mitady mihintsy ity
zanakisoa mpams ity kah!!!!tonga dia vitao ny aminy fa be fika ratsy kala
ratsy velina tsy misy hilavana azy iny!!tsy bika tsy hendrika nefa dia mba miseho ho inona ery,
miseho mba manao ts’inontsinona olona ery.
Tonga dia haleteo daholo @’ireny halatra rehetra nataony ireny ry lehibean’i SMM a! iny no tokony
higadra mandra-pahafatiny miaraka @ domelina,izany no aina koa tė hanao aminy eo, matahotra e!
matahotra ny hifoteran’ny rambony dia naleony ny azy no nataony tonga aloha.
Migadra mandrapahafatiny i Charles satria nikororoka an’i domelina sy ny tsotsoka alika tsy mivositra.
Miantsy ady izy ka avelao hanao ihany.vehivavy alika vavy!!!!alika mbola misy lanjany noho ity zanakisoa.
Fanjakan’alika tsy nisy nifidy teo akory koa mba hoe: manongam-panjakana???
iza no tena nanongam-panjakana ??iza no tena tokony hanao asa anterivozona mandra-
pahafaty???iza no namotika ny firenena toy izao??Mbola ho avy ny anjaranao rakrisy fa ho eo foana mantsy ireto
renikely nononao ireo!!mbola ho azonay e!!aza maika!!ratsy ohatra azy ihany ny fanahiny.
Fa fanjakan’inona no teo ry ilay aza vanona isany a!!izay fanjakam-poza ve???nisy nifidy anareo angaha teo????
taiza no natao ny fifidianana?? teny @ 13 may??teny an-dalam-be???raha mbola ao koa izao Andriamanitra izao an…….
Mahereza ry fianakaviana manontolo ry zaza amam-behivavy!!ny tompo
homba anreo !nidiran-doza ny firenensika e!!!mitrakà fa tsy maintsy hisy
valiny izao na ho ela na ho haingana ary aza kivy fa homba ny malahelo sy izay hianjadian’ny tsy rariny toy izao
Andriamanitra.mivavaka mafy ho an’ny fianakaviana e!!mahereza tompoko !!!miombona alahelo aminareo ny zanak’
i dada rehetra na ny ampita na ny ao an-toerana.Mahatsiaro mafy anareo zanany sy vadiny manokana aho.
Mba fanavotana ilay tanindrazana no nanosika azy ireo nefa izao no valiny hafitsok’ireo SADIKA TSIVALAHARA IREO.
Asivo fitarainana any amin’ny Ligue des droits de l’Homme any Suisse.
Précédent Article précédent : Fitsarana ny raharaha BANI : mbola hitohy rahampitso indray…
Suivant Article suivant : Fisaorana sy fankasitrahana avy amin’ny Pr Ranjeva Raymond